को बन्दैछ प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री ? « Globe Nepal
को बन्दैछ प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री ?
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा देखिएको विवाद सबै प्रदेशमा छताछुल्ल हुन थालेको छ। एमालेका दोस्रो तहका १० नेता एमालेमा फर्किएपछि प्रदेश १ को सरकार पनि फेरिने भएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनाएको भोलिपल्ट प्रदेश १ मा शेरधन राईले करिब साढे तीन वर्ष लामो सत्ता यात्रा टुंगाउँदै छन् ।
राईले आफ्नो सत्ता यात्रालाई टुंगोमा पुर्‍याउन आज बिहीबार बिहान एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । काठमाडौंमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत रहेकाले त्यस अघि पार्टीको द्वन्द्व सकिएको सन्देश दिन मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य आउन सक्ने चर्चा प्रदेश १ मा भइरहेको छ।
उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिने तयारी छ । त्यही बैठकबाट यसअघि मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका आचार्यलाई दलको नेता बनाइनेछ ।
राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । राई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् । आचार्य भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालनिकट हुन् ।
खनाल दिल्ली जानु अघिसम्म आचार्य नेपाल–खनाल समूहमै थिए । तर पछिल्लो समय नेपालले पार्टी फुटाउने कुरामा असहमति राख्दै आचार्य एमालेमै रहेका हुन् ।
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद रहेका छन् । जसमा ६ देखि ७ जना सांसद नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीमा जान तम्तयार रहेका बताइन्छ। नेपाल पक्षले भने कम्तीमा १३ सांसद आफ्नो पक्षमा खुल्ने बताउँदै आएको छ। ५१ सांसदमध्ये अहिलेसम्म ४ जना नेपालको नेकपा समाजवादीमा खुलिसकेका छन्।
प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनले भने एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।